25 BEST DAVID BECKHAM IINWELE KUNYE NEENWELE (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda 25 UDavid Beckham weenwele
Njengomnye wabadlali bebhola ekhatywayo abadumileyo kunye neempawu zefashoni kwihlabathi, ayimangalisi into yokuba unomdla wokuzama iinwele zikaDavid Beckham. Nokuba ngaba kukucheba iinwele kweBeckham zakudala…
Njengenye yezona zidumileyo abadlali bebhola ekhatywayo kunye neempawu zefashoni kwihlabathi, akumangalisi ukuba unomdla wokuzama iinwele zikaDavid Beckham. Nokuba kukucheba iinwele zakudala zikaBekkham okanye iinwele zakhe zamva nje, i-superstar inyikimise iindlela ezininzi kunye nembonakalo!
Njengompetha webhola ekhatywayo waseNgilani obenabafazi abathandayo ngenxa yeenkangeleko zakhe ezintle kunye neenwele ezinesitayile kangangeminyaka, awungekhe uhambe gwenxa nangaluphi na uhlobo lweenwele ezimfutshane nezinde zeBekkham. Ngaphandle kwexabiso lakhe lezigidi kunye nezakhono zakhe ezibonakalayo kwibala lebhola, u-Beckham uzenze waziwa njenge icon yesitayile ongoyikiyo ukuzama into entsha. Kwaye nokuba yeyiphi na inwele athatha isigqibo kuyo, ndicinga ukuba sonke singavuma ukuba uhlala eyikhupha.
Nazi iindlela eziphambili zikaDavid Beckham zokucheba iinwele zamadoda ukuzama okwangoku!
isimbo seenwele zamadoda akwishumi elivisayo
1Eyona ndlela ihamba phambili kaDavid Beckham
MbiniIzinwele ezinde zikaBekkham - I90s
3Beckham kunye neBangs
4Iinwele ezimfutshane zika-Beckham-Ukusikwa kweBuzz
5Beckham kunye neMohawk
7Izinwele ezinde ezinebhanti yentloko
8Beckham kunye neCornrows?
9Indoda kaDavid Beckham Bun
10Uhlobo lweShaggy Hairstyle
Shumi elinanyeI-Buzz Sika kunye neendevu ezipheleleyo
12Ukungakhathali, iinwele ezinde
13Amacandelo amafutshane aneTop ephezulu
14Iinwele ezininzi zikaDavid Beckham
18Umbhalo oCwangcisiweyo ubuyile
Amashumi amabiniUlusu luphela kunye neFaux Hawk
amashumi amabini ananyeIzinwele eziCociweyo
22Iinwele ezinde ezithunyelweyo
2. 3Amacandelo amafutshane kunye nokuDityaniswa okude
24I-Angular Comb ngaphezulu kweendevu
Eyona ndlela ihamba phambili kaDavid Beckham
Apha, sivavanya zonke iinwele zikaDavid Beckham kunye neenwele, ukusuka kwi-buzz cut to the man bun to the pompadour nayo yonke into ephakathi.
Izinwele ezinde zikaBekkham - I90s
Okokuqala, sithatha uhambo oluya ezantsi kwimemori ukukhumbula iinwele zika-Beckham xa wayeyinkwenkwezi yebhola ekhulayo kwi-90's. Ngokuhambelana neendlela zelo xesha, iinwele zika-Beckham zazimfutshane zijikeleze amacala ngefloppy, izitshixo ezinde kunye nenxalenye ephakathi phezulu.
Beckham kunye neBangs
Emva koko, u-Beckham wangena kwindawo enobungozi xa wayezama i-bangs. Uninzi lwethu, ii-bangs ezingalunganga zinokuba sisigqibo esibi sesimbo. Kodwa ngo-Beckham, ezinye iinwele ezinqunqileyo ebunzini lakhe azange zibonakale zitshintsha kakhulu ngenkangeleko yakhe, ubuncinci hayi kubalandeli abazinikeleyo.
Iinwele ezimfutshane zika-Beckham-Ukusikwa kweBuzz
Abafaki bakhupha isiqabu sonke xa u-Beckham waya kunye nokusika kwendabuko ngokulandelayo. I-sleek, ilula, inomdla, kwaye ifreyimu yeempawu ezibunjiweyo ebusweni bakhe ngokugqibeleleyo; Emva kwayo yonke loo nto, ukusikwa kwe-buzz yindawo entle yokwenza iinwele ngobume besikwere. Kodwa ngokucacileyo ukusikwa kwe-buzz kwakucace gca kukhetho luka-Beckham, kuba emva koko waphuma konke nge-mohawk.
Beckham kunye neMohawk
I-mohawk kaDavid Beckham ngokuqinisekileyo yayihlukile kune-mohawk engapheliyo. Inkwenkwezi yebhola ekhatywayo yacheba macala omabini entloko ukuze ibethelele umgca omfutshane, obhityileyo weenwele ezitshixwayo ezishiyekileyo embindini.
Ukuthetha ngokuzama iinwele ezintsha, u-Beckham ubonakala edayiwe kwiinwele kwaye wagqiba kwelokuba aye Iplatinum blonde jonga ngoboya obufudumeleyo, iinwele ezinamabala kunye nebhokhwe encinci.
Izinwele ezinde ezinebhanti yentloko
Iinwele ezi-shaggy, ze-boy-band kubonakala ukuba zazingekabi lide ngokwaneleyo kwisitayile sika-Beckham kuba emva konyaka wahamba kunye nezitshixo zobude bendlebe. Nangona wayebonakala evumela iplatinam blonde ukuba iphele ngokwendalo, kwakusekho imitya yegolide edityanisiweyo kumbala wakhe omdaka okhanyayo. Uye wadlala ibhanti yentloko ukuze agcine iitress zakhe zityhalelwa emva ebaleni.
Beckham kunye neCornrows?
Enye yeendlela zakhe ezidumileyo, ezikulungeleyo ukuza kuthi ga ngoku yayizezikaBeckham amakhonco alukiweyo . U-Beckham wayenabo ixesha elifutshane, enkosi, kwaye kamva wavuma ukuba wayenokuba nengcebiso encinci xa wayegqiba ukubonakala okugwenxa.
Indoda kaDavid Beckham Bun
Okulandelayo yayiyindoda eyaziwayo yebhan. U-Beckham wanyikima i-man bun hairstyle ngaphambi kwe-hipsters kunye ne-trendy millennials eyenza isitayile siqheleke kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngenxa yokuguquguquka kweenwele zakhe ezinde, ngamanye amaxesha u-Beckham wayezonwabisa ngezinwele zemveli ezinamaqhina aphezulu, eyahlukileyo kumkhwa weqhina lanamhlanje elibonisa ukuphela okuphezulu.
Uhlobo lweShaggy Hairstyle
Emva koku, u-Beckham wahamba kunye neenwele ezimfutshane kunye neenwele ze-shaggy. Nangona kunjalo, i-shaggy, iinwele ezingakhange zenziwe ngaphezulu mazibe kwakungekho lula okanye ukugcinwa okuncinci ngokwaneleyo.
I-Buzz Sika kunye neendevu ezipheleleyo
Kungekudala emva koko, u-Beckham wahamba mfutshane kakhulu nge-buzz cut sleek kunye neendevu ezipheleleyo. Kubonakala ngathi ujonge inkangeleko yomntu onzima, kubonakala ngathi iinwele zimfanele kakuhle kwaye yayilixesha lakhe lesibini ejikeleza ngokunikezela ngenkangeleko.
iinwele inxalenye ephakathi indoda
Ukungakhathali, iinwele ezinde
Ukuya esiphelweni somsebenzi wakhe, kwaneenwele zakhe zaqala ukubonakala zindala: i-mullet ngasemva, isuntswana ngaphambili, kunye ne-hair ephazamisayo embindini.
Amacandelo amafutshane aneTop ephezulu
Ekugqibeleni, ngokuphela kwebhola lebhola likaBekkham kwakhona kwafika ukuphela kweenwele zakhe eziphambeneyo. Ngo-2013, wakhetha ucoceko, isitayile esifutshane esineenwele kunye nenxalenye yecala kunye ne-quiff ehlaziyiweyo ngaphambili.
Iinwele ezininzi zikaDavid Beckham
Kwanasemva kokuba ethathe umhlala-phantsi kwibhola ekhatywayo yobungcali, iinwele zikaDavid Beckham kunye neenwele zakhe zibambe imixholo yemagazini yefashoni kwihlabathi liphela. Nazi ezinye zeendlela ezitshisayo zikaBekkham kunye nembonakalo yakutshanje kunye nengqokelela enkulu yemifanekiso yeenwele kulo lonke ikhondo lomsebenzi wakhe.
Umbhalo oCwangcisiweyo ubuyile
ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwi-chiron
Ulusu luphela kunye neFaux Hawk
Iinwele ezinde ezithunyelweyo
Amacandelo amafutshane kunye nokuDityaniswa okude
I-Angular Comb ngaphezulu kweendevu
I tattoos zokhakhayi zamadoda
2 braids for guys
iitattoos zedragoni zamadoda
iiplanethi kunye neentsingiselo zazo
ubude beenwele obuphakathi amadoda
isixhobo sokubala iimpawu zodiac
I-45 yoLusu oluphelileyo lweenwele